Tiri kuda mamasiki | Kwayedza
22 Oct, 2020 - 09:10	 2020-10-22T09:15:07+00:00 2020-10-22T09:15:07+00:00 0 Views
HURUMENDE inoti midziyo nezvimwe zvekushandisa mukurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 zviripo zvinokwanirana uye zvakadai semamasiki anoshandiswa kamwechete achibva araswa nemushonga wekuzora maoko wemasanitiser zviri kudiwa zvakanyanya zvichitevera kuvhurwa kwezvikoro.
Vachitaura kuvatori venhau nemusi weChipiri mushure memusangano wedare reCabinet muguta reHarare, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko nenyaya dzenhepfenyuro, Senator Monica Mutsvangwa vanoti mimwe yemidziyo iyi, mamasiki nemagirovhosi, iri kugadzirwa munyika muno.
“Panyaya yekugadzirwa kwezvinhu zvekurwisa kupararira kwechirwere ichi, Cabinet iri kuona kuti pane kudiwa kwakanyanya kwemamasiki anoshandiswa kamwe chete achibva araswa nemasanitiser zvichitevera kuvhurwa kwezvikoro nguva pfupi yadarika kuvana vari kunyora bvunzo.
“Tine midziyo iyi inokwanirana iri kugadzirwa munyika muno pamwe chete nemishonga yekubatsira varwere veCovid-19,” vanodaro.
Sen Mutsvangwa vanoenderera mberi vachiti, “Cabinet inoramba ichiyeuchidza vagari vemunyika muno kuti matanho ekurwisa Covid-19 aripo pakuchengetedza utano hwavo uye kudzivirira kupararira kwechirwere ichi nekudaro anofanirwa kutevedzerwa.”
Vanoti bazi redzidzo yepuraimari nesekondari zuva nezuva riri kuramba richiongorora huwandu hwevana vari kunyora bvunzo vari kuenda kuchikoro pamwe chete nevarairidzi vavo munyika yose.
“Pakupera kwesvondo ra16 Gumiguru 2020, pakaonekwa kuwanda kwevarairidzi vaiita basa muzvikoro zviri kuMasvingo, Matebeleland North neManicaland kana zvichienzaniswa nesvondo rakange radarika. Bazi redzidzo yepuraimari nesekondari svondo rino richaita ongororo yekuona pasvika gadziriro dzekuvhurwa kwezvikoro pasi pechikamu chechepiri (Phase 2) apo vana veGrade 6, Fomu 3 ne5 vachatanga kudzidza,” vanodaro.
Hurumende yakatora danho rekuti zvikoro zvivhurwe muzvikamu zvitatu nechinangwa chekurwisa kupararira kweCovid-19.
Vadzidzi veGiredhi 7, Fomu 4 ne6 ndivo vakatanga kuvhura nemusi wa28 Gunyana apo veGireghi 6, Fomu 3 ne5 vachavhura musi wa26 Gumiguru.
Vamwe vana vose vachazovhura musi wa9 Mbudzi.
Kusvika nemusi weChipiri, Zimbabwe yange yava nevanhu 8 187 vakawanikwa vaine Covid-19 mushure mekunge vavhenekwa kubvira pakatanga chirwere ichi muna Kurume wegore rino.
Pavarwere ava, 7 692 vavo vakatopona asi vamwe 233 vakafa.